Walsh ayaa madaxa ka qaata IATA
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Walsh ayaa madaxa ka qaata IATA
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Walsh waxaa loo xaqiijiyay inuu yahay Agaasimaha Guud ee 8-aad ee IATA iyadoo la qabtay shirkii 76-aad ee sanadlaha ahaa ee IATA 24kii Nofeembar 2020
Willie Walsh wuxuu si rasmi ah ula wareegay doorka Agaasimaha Guud ee ururka
Walsh wuxuu ku biirayaa IATA kadib mudo 40 sano ah oo uu ku dhexjiray warshadaha diyaaradaha
Walsh waxay si qoto dheer u taqaanaa IATA, iyada oo ka shaqeysay Gudiga IATA ee Maamulayaasha mudo ku dhow 13 sano
Ururka Caalamiga ah ee Gaadiidka Cirka (IATA) ayaa ku dhawaaqay in Willie Walsh uu si rasmi ah ula wareegay doorka Agaasimaha Guud ee ururka. Wuxuu ku guuleystey Alexandre de Juniac.
Waxaan ku faraxsanahay warshadeena iyo shaqada muhiimka ah ee IATA ku sameeya magaca xubnaheeda, marna kama badna intii lagu jiray xiisadda COVID-19. IATA waxay hormuud ka ahayd dadaalada dib loogu bilaabayo isku xirnaanta adduunka, oo ay ku jirto horumarinta IATA Travel Pass. Wax yar oo muuqda laakiin muhiimad siman leh, diyaaradaha waxay sii wadaan inay ku tiirsanaadaan nidaamyada dejinta maaliyadeed ee IATA, Timatic iyo adeegyo kale oo muhiim ah si ay u taageeraan howlahooda maalinlaha ah. Waxaan u mahadcelinayaa Alexandre oo aan ka tagay urur xoog leh iyo koox dhiirigalin leh. Wadajir ahaan, kooxda IATA waxay gabi ahaanba diiradda saareysaa soo celinta xorriyadda dhaqdhaqaaqa ee diyaaradaha ay siiyaan balaayiin dad ah oo adduunka ku nool. Taasi waxay ka dhigan tahay xorriyaddaada inaad booqato asxaabtaada iyo qoyskaaga, inaad la kulanto la-hawlgalayaal ganacsi oo muhiim ah, si aad u ilaaliso una ilaaliso qandaraasyada muhiimka ah, iyo inaad sahamiso dhulkeenna cajiibka ah, ”ayay tiri Walsh.
“Waqtiyada caadiga ah in kabadan afar bilyan oo safar ah waxay kuxiranyihiin duulimaadyada sanadkasta baahinta talaalada ayaa kadhigtay qiimaha xamuulka wax ku oolka ah ee hawada. Shirkadaha Duulimaadyada waxaa ka go’an inay gaarsiiyaan adeegyo aamin ah, hufan, oo waara. Hadafkeygu waa inaan hubiyo in IATA ay tahay cod xoog leh oo taageeraya guusha gaadiidka caalamiga ah. Waxaan la shaqeyn doonnaa taageerayaasha iyo dhaleeceeyayaasha si isku mid ah si aan uga dhabeyno ballanqaadkeenna ku aaddan warshad diyaaradeed oo deegaan ahaan waara. Shaqadaydu waa inaan hubiyo in dawladaha, oo ku tiirsan faa'iidooyinka dhaqaale iyo bulsho ee warshadeennu soo saarto, ay sidoo kale fahmaan siyaasadaha aan ugu baahan nahay inaan ku gaarsiino faa'iidooyinkaas, ayay tidhi Walsh.
Walsh waxaa loo xaqiijiyay inuu yahay Agaasimaha Guud ee 8-aad ee IATA iyadoo la qabtay shirkii 76-aad ee sanadlaha ahaa ee IATA 24-kii Noofambar 2020. Wuxuu ku biirayaa IATA ka dib 40-sano oo uu ku dhex jiray howlaha shirkadaha diyaaradaha. Walsh wuxuu hawlgab ka noqday Kooxda Caalamiga ah ee Diyaaradaha (IAG) bishii Sebtember 2020 ka dib markii uu maamule ka ahaa tan iyo markii la aasaasay 2011. Intaas ka hor wuxuu ahaa madaxa shirkadda British Airways (2005-2011) iyo Aer Lingus (2001-2005). Wuxuu shaqadiisa ka bilaabay duulimaadka Aer Lingus sanadkii 1979 isagoo ahaa duuliye diyaaradeed.
Walsh waxay si qoto dheer u taqaanaa IATA, iyadoo ka soo shaqeysay Gudiga IATA ee Gudoomiyaasha Gobalada ku dhowaad 13 sano intii u dhaxeysay 2005 ilaa 2018, oo ay ku jiraan u adeegida Kursiga (2016-2017). Wuxuu ka shaqeyn doonaa Xafiiska Fulinta ee Ururka ee Geneva, Switzerland.